China Brake Wheel Cylinder JAF0662 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | JAF
Vakin-koditra varingarina varingarina JAF0662
Noho ny firafitry ny vodin-tsisiny kokoa, ny herin'ny varingarin-tsolika dia ampitaina mivantana any amin'ny plastika. Ny fahombiazan'ny freins dia avo kokoa ary maivana ny lanjan'ny rafitra iray manontolo. Araka ny angon-drakitra eny an-tsena, ny traktera 6 × 4 misy kodiarana aloha sy aoriana nosoloina frein wedge dia afaka mampihena 55 kg ny lanjany.
Ankoatr'izay, miaraka amin'ny fanatsarana ny toe-piainan'ny fifamoivoizana sy ny fanatsarana tsy tapaka ny fahombiazan'ny fiara, ny varingarina vakin-damosina, ho toy ny vokatra vaovao izay afaka manatsara ny fiarovana ny fiara, ary hampiroborobo sy hampiharina haingana.
Famaritana ny vokatra: Ity vokatra ity dia mety amin'ny modely maro eny an-tsena amin'izao fotoana izao, ary malaza be eo amin'ny tsena izany.
Tombony azo varingarina
1. Mavesatra maivana: raha ampitahaina amin'ny valin-drakitra nentin-drazana nentin-drazana, ny fivorian'ny kitapo ao amin'ny rafitra fametahana volo izay manolo ny sandry manitsy ny tena, ny camshaft ary ny efitranon'ny rivotra ao amin'ny rafitra famatarana nentim-paharazana ary somary maivana kokoa ny takelaka ambany vaky noho ny takelaka frein nentim-paharazana. Araka ny antontan'isa, ny varingarina volo dia afaka mampihena ny lanjany amin'ny 10-15kg.
2. Valiny haingana amin'ny valin-drakitra ary torsiam-by lehibe: ny tsimok'aretin'ny wedge dia manana rafitra tsotra kokoa noho ny frezy camshaft mahazatra. Ny fahombiazan'ny fandefasana varingarina vita amin'ny volo dia lehibe kokoa noho ny varingarina camshaft, ary ny fahaverezan'ny tosika dia kely amin'ny dingan'ny fanosehana. Noho izany, rehefa mandeha ny freins, ny valin-drihana dia manana valiny haingana sy tilikambo fanidiana lehibe.
3. Izy io dia afaka mampihena ny vidin'ny solika sy ny vidin'ny fitaterana
Modely: Mitsubishi / Isuzu / Hino / Nissan
Famaritana: 6wf1 / fp51j / rm11f / fuso-fv515
OE No .: MC-889050 / 1-47601087-0 / 47510-1830A / 44100-90413
JAF No. .: JAF0662 #
Lanja milanja: 3.5kg Lanja mavesatra: 3.75kg,
Fomba fanangonana: boaty anatiny iray isaky ny vokatra, boaty anatiny 8 ho an'ny boaty iray
Fonosana tsy miandany: ny vokatra tsirairay misy harona plastika iray, boaty anatiny ary baoritra ivelany
Haben'ny boaty ivelany: 48CM * 41cm * 21cm, haben'ny boaty anatiny: 23cm * 20cm * 8.5cm
1. Vatosoa misaraka (ho an'ny zana-kazo) 2. Gasket an'ny lolo 3. Lohataona tilikambo 4. Tsoraka manosika 5. Fonosana vovoka kely 6. Seza lohataona 7. Rano mitazona (ho an'ny lavaka) 8, Ampidiro 9. Roller 10. Karatra 11. Spring 12 .Manitsy bolt 13. peratra fihazonana 14. lohataona toritelo 15. fonony vovoka 16. Lohataona lolo 17. tanany Piston 18.Piston 19. Slider 20.Shell 21. Bolt
1 - kiraro 2
Torolàlana: ny kilometatra fikojakojana ny frezy visy dia atolotra ho 100000 km. Ny tena fanaraha-maso dia ny hijerena ny menaka fanosorana ao anaty freins miharatsy sy ny tombo-kaseny. Raha hita fa miharatsy io dia ilaina ny manadio ny faritra rehetra ary mametaka azy ireo ho fikojakojana (naoty: voarara mafy ny firakotra amin'ny vovoka tsy hifandray amin'ny solvent fanadiovana, toy ny diesel, solitany, lasantsy, sns.), Amboary ary ataovy ny anatiny feno menaka. Raha simba ny fonony dia mila soloina ny fonony. Ny menaka fananganana lithium ankapobeny (cb5671) dia ampiasaina ho menaka manitra. Raha misy faritra simba dia tsy maintsy soloina.
Previous: Factory Cheap Hot Injector Rocker Arm - Vakin-tsarimihetsika volo volo JAF0662 - JAF
Manaraka: Vakin-koditra varingarina varingarina JAF0851
Manova varingarina Master Varingarina
Varingarin'i Master Brake Master
Kbx Brake Master Cylinder
Tsipika fanaovam-pirinty malefaka malefaka
Vakin-koditra varingarina varingarina JAF0784
Vakin-koditra varingarina varingarina JAF0770
Vakin-koditra varingarina varingarina JAF0692
Vakin-koditra varingarina varingarina JAF0851
Vakin-kodiarana varingarina varingarina JAF0699
Vakin-kodiarana varingarina varingarina JAF0805